आफ्नो जीवनलाई नै तिलाञ्जली दिदै डा.गोविन्द केसीको १६औं सत्याग्रह, २४औं दिनमा विभिन्न समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायदका प्रतिष्ठित ब्याक्तिहरुको निरन्तर आग्रहमा आमरण अनशन अन्त्य गरेका छन्। जनादेश बहुमत प्राप्त सरकारले यस्ता संबेदनशील महत्व बोकेका मुद्दाको सम्बोधन गरेर सधैको लागि अन्त्य गर्नु पर्दछ। यस विषयलाई लिएर सामाजिक संजालहरुमा समेत समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको द
बीपीका जुनियर रेजिडेन्टको टोली इलाम प्रस्थान
धरान/ चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १६ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्नका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चारजना डाक्टरहरू इलाम प्रस्थान गरेका छन् । डा. केसीले १६ औं सत्याग्रह इलामबाट शुरु गरेका छन् । बुधबारदेखि अनसन थालेका डा. केसीको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक बनेपछि नैतिक समर्थनसहित स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी प्रतिष्ठानको टोलीमा अध्यक्ष कविराज पौडेल, डा. डेनप्रसाद आचार्य, राजीव न्यौपाने र अरुण सापकोटा रहेका छन् । उनीहरू सबै जुनियर रेजिडेन्टहरू हुन् । अध्यक्ष पौडेलका अनुसार त्यह
प्रकाशित मितिः माघ २, २०७५